Vitkovice v Krkonosich, Buuraha Weyn - PetrPikora.com
Vitkovice in Mountains Giant ah
PetrPikora.com on Janaayo 13, 2018
Tuulada Vitkovice (Jarmal Witkowitz) waxay ku taallaa degmada Semily, gobolka Liberec. Waxay ku jirtaa Giant Mountains dooxada Wabiga Jiceka. 28. 8. 2006 waxaa degganaa 426. Tilmaamaha ugu horreeya ee tuulada ayaa ka yimid 1606.
1. kala bar 17. Rugta quraaradaha ee reerka ee Preisslera ee quraaradaha ayaa halkan ka shaqeeyey. Tuuladu waxay ka kooban tahay hal goob oo cadcad (Vítkovice v Giant Mountains) oo uusan ka tirsanayn degaanka. tuulada gaar Vitkovice waa wadada II / 294 qaybta koonfur-galbeed ee goobta cadastral, qaybta galbeed waxaa lagu magacaabaa Upper Vitkovice, meelo kale (inta badan dejinta dejinta filiqsanaa) magacyada orso Levínek, Zákoutí, Janova Hora, Mevaldův Hill, Glass abuurtay, Třídomí Hoose Misecky iyo Horni Misecky.
Tuuladu waxay ka kooban tahay hal goob oo cadcad (Vítkovice v Giant Mountains) oo uusan ka tirsanayn degaanka. tuulada gaar Vitkovice waa wadada II / 294 qaybta koonfur-galbeed ee goobta cadastral, qaybta galbeed waxaa lagu magacaabaa Upper Vitkovice, meelo kale (inta badan dejinta dejinta filiqsanaa) magacyada orso Levínek, Zákoutí, Janova Hora, Mevaldův Hill, Glass abuurtay, Třídomí Hoose Misecky iyo Horni Misecky. Degmada waxaa ka mid ah wadada socda ka Horni Misecky in Vrbatova daadiyaan.
Kaamka cadmeed ee degmada waxaa ku yaal xaafaddeeda magaalada galbeed Rokytnice (fiiri Rokytno v Giant Mountains iyo Frantisek v Giant Mountains) iyo Jablonec nad Jizerou (K. U. Upper Dušnice) xagga koonfureed oo la dhulal tuulada Hawk in Mountains Giant ah (k. Jestřabí u. Buuraha Giant ah, Roudnice ee Giant iyo Křížlice) iyo Benecko (U k.. Upper Štěpanice iyo Benecko) ee qaybta bari ee magaalada Vrchlabí (k. p. Horejsi Vrchlabi) iyo Špindlerův Mill (k u.. iyo Imaanshaha Elbe Bedřichov).
Qeybo badan oo ka mid ah Buuraha Giant ayaa ka tirsan tuulada. tip Northern ee degmada waxaa ka mid ah buur Kotel (m 1435) iyo Kotelsko god Vrbatova daadiyaan, iyo dhagaxyo Harrachovy. Aagga this, socodka xagga koonfureed u geliyey durdur Mísečky Hoose Kotelsko. West dooxada iliiladaha Kotelského kala xigtaa Kozelský. galbeed Kozelského of xigtaa waxay kuorodaa xagga woqooyi dooxada koonfurta durdur Kozelského ordaya hoos uga Dvoračky (taas oo, si kastaba ha ahaatee, durbadiiba waxaa gayiga Rokytna). soohdinta Area Western waddaa weheliyaan xigtaa, iyo buuraha Wolf Braun Mevaldův iyo in ay dusha sare ee buurta geenyo (m 897) kor ku xusan Stromkovice iyo aboodiga. South tuulada Vítkovice socodka xagga galbeed iyo bari Vítkovice durdur. Shanlada, ka dib markii taas maraa soohdinta bari ee degmada, waxaa ka mid ah buuraha Serino (1027 m) (isaga guureen xagga dooxadii ku Jizerky xigtaa ee saadaalineysa ee Genoa Mountain oo dhinaca woqooyi oo xeeb ku qubanayo ručej Black), Black Rock (1039 m), Mechovinec (1081 m), iyo xigtaa ariga (1034 m) (marka laga tago dooxadii therebetween socodka god Jizerky Kozel).
Sadexda taayirada barafka waxaa ku yaal koonfurta tuulada Vítkovice. Laba dabaq oo kale ayaa ku yaal aagga Janova Mountain. Hal kicid waxay ku taal Dolní Mísečky. Qiyaastii sedexda gaaban ee gaaban waa Hornin Mísečky. Si kastaba ha noqotee, dhererka dheer ee Horní Míseček ee Medvědín ayaa horey u jirey magaalada Špindlerův Mlýn.
Wadada waxay ka socotaa Horní Míseček ilaa Vrbatova bouda. Qaadashada 16.07.2016
dji mavicdronedroneMountainskvadroptéraTariinLysa Horaskiingmavicgawaaridameesha baabuurta la dhigtophantomphantom 3phantom 4Polandski miciinkaskipashoygaVitkoviceshootalika sarraysayna